အပိုပစ္စည်းများ | အပိုပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု | ကူဘိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကူဘိုတာ၏ စစ်မှန်သောပစ္စည်းများကို ဆက်လက် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ကူဘိုတာစက် အရည်အသွေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပါ။
စစ်မှန်သော ကူဘိုတာ အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်၏ ကူဘိုတာ စက်ယန္တရားများ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွာ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် လည်ပတ်နိုင်စေရန်တိကျခိုင်မာသော စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို စျေးကွက်သို့မတင်ပို့မီ အကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကူဘိုတာ သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသာ ထုတ်လုပ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်၏ ကူဘိုတာသည် အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပြည့်စုံစစ်မှန်သော ကူဘိုတာ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာ ကုန်သည်များမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်များသည် ကူဘိုတာ စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများအား ၀န်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးကူညီမှုများစွာ ပေးနိုင်ရန် အပိုစက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို အရန်သင့်သိုလှောင်ထားပါသည်။
လုံခြုံမှု၊ စိတ်ချရမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့်အာမခံချက်အတွက်စစ်မှန်သော ကူဘိုတာ အပိုပစ္စည်းများကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။
ကူဘိုတာ၏ အစစ်အမှန် အပိုပစ္စည်းများ
ကူဘိုတာ၏အစစ်အမှန်အပိုပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အနီးစပ်ဆုံး ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ကူဘိုတာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆီ သည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုကိုလုပ်ဆောင် အကျိုးပြု ပေးသည်။
ချောဆီ: အစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဆီဖြင့်ဖုံးအုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတွင် လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေသော အစိတ်အပိုင်းများပွန်းစားမှုကို လျော့နည်းစေပြီ: ချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည် ကိုရရှိစေသည်။
အအေးခံခြင်း: အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းမှထုတ်လုပ်လိုက်သော အပူကိုစုပ်ယူပေးခြင်းဖြင့် အပူကြောင့်အစိတ်အပိုင်းများ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်လဲခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
လုံစေခြင်း: ပစ်စတင်နှင့်ဆလင်ဒါတို့၏ အတွင်းကြားလွတ်နေရာများတွင် ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်၏ လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဖိအားကျဆင်းမှုကြောင့် စွမ်းအားဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးသည်။
သန့်စင်ခြင်း: အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းစေသော သတ္ထုအမှုန်များနှင့်ကျပ်ခိုးများ ကဲ့သို့သောအညစ်အကြေးများကို စုစည်းပြီးသန့်စင်ပေးသည်။
ဘာကြောင့် ကူဘိုတာကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?
ဂီယာဝိုင်၏ လုပ်ဆောင်ချက် (၄)ချက်
(၁) ဂီယာစနစ်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသကဲ့သို့၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီကဲ့သို့လည်းလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
(၂) ဘရိတ်အစို သို့မဟုတ် ကလပ်မှ အသံထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
(၃) ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တုန့်ပြန်မှုကြောင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကာ ဂီယာအုံအတွင်းရေဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
(၄) အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိုလှောင်ထားစဉ် ဂီယာစနစ်ကို သံချေးစားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ဆီပျက်စီးခြင်း/ပျက်စီးနေသောဆီကိုသုံးစွဲခြင်းသည် မည်သို့သောထိခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်လဲ?
ကူဘိုတာ၏ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဆီသည် ကူဘိုတာစက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ စက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ ဆီ၏ ဂုဏ်သတ္တိလည်းကျဆင်း/ပျက်စီးလာမည်ဖြစ်၍ စက်ကိုအမြင့်ဆုံးအခြေအနေအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆီကို ပုံမှန် လဲလှယ်ပေးဖို့ လိုအပ်သည်။ ဆီကို ပုံမှန် မလဲလှယ်ခြင်းသည် ဂီယာစနစ် နှင့် ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ကိရိယာများကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘဲ စက်၏သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေနိုင်ပါသည်။
ကူဘိုတာအင်ဂျင်ဆီစစ်များသည် အင်ဂျင်ဆီအတွင်းရှိ သတ္ထုမှုန်များကိုစစ်ထုတ်ပေးပြီး၊ ဆီပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာဗွန်အနည်များကဲ့သို့သောအညစ်အကြေးများကိုလည်းစစ်ထုတ်ပေးသည်။
ကူဘိုတာလောင်စာဆီစစ်များသည် လောင်စာဆီအတွင်းရောနှောပါဝင်လာသော ရေနှင့် ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
ကူဘိုတာလေစစ်များသည် ဖုန်မှုန့်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီး လေကိုသန့်စင်ပေးခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်အတွင်းပွန်းစားမှု ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၏ အရေးကြီးပုံ
အကယ်၍ သင်သည်ဆီစစ်များကို လဲလှယ်ခြင်းမပြုခဲ့လျှင်……
ဆီစစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖုန်မှုန့်နှင့်အညစ်အကြေးများ စက်အတွင်းပိုင်းသို့ဝင်ရောက်ကာ စက်၏အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေပြီး စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေကာ ပျက်စီးမှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဆီများကို လဲလှယ်ခြင်းမပြုခဲ့လျှင်……
ဆီမလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီညစ်ညမ်းခြင်းများသည် စွမ်းအားကျဆင်းမှုကိုဦးတည်စေသည်၊ လောင်စာဆီစားနှုန်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ ပွန်းစားပျက်စီးမှုကိုလည်း တိုးလာစေသည်။ အင်ဂျင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာ ထိခိုက်စေသည်သာမက ပျက်စီးခြင်း သို့လည်းဦးတည်စေသည်။
လေစစ်ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ အင်ဂျင်ပေါက်ကွဲမှုစနစ်အတွက်သန့်စင်သည့် လေလုံလောက်စွာ မရရှိနိုင်ပဲ အင်ဂျင်၏စွမ်းဆောင်ရည် ထိခိုက်နိုင်သည်။ ဖုန်မှုန့်နှင့်အညစ်အကြေးများကလည်း အင်ဂျင်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အင်ဂျင်ပျက်စီးခြင်းဆီသို့ ဦးတည်စေပါသည်။